ကာဇက်စတန်နိုင်ငံ၌ လက်နက်ခဲယမ်းသိုလှောင်ရုံ ပေါက်ကွဲမှုအတွင်း လူ ၄ ဦး သေဆုံး ၊ ဒါဇင်ပေါင်းများစွာ ဒဏ်ရာရရှိ - Xinhua News Agency
နာလ်ဆူတန် ၊ ဩဂုတ် ၂၇ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ကာဇက်စတန်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း Taraz မြို့၌ ဩဂုတ် ၂၆ ရက်ညပိုင်းတွင် ဆက်တိုက်ပေါက်ကွဲမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး တပ်သား ၄ ဦး သေဆုံးကာ လူဒါဇင်ပေါင်းများစွာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း တာဝန်ရှိသူများက ဩဂုတ် ၂၇ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ယင်းမတော်တဆမှုအား ရှင်းလင်းဖယ်ရှားနေစဉ် တပ်သား လေးဦး သေဆုံးပြီး လူများစွာ ပျောက်ဆုံးနေကြောင်း ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Nurlan Yermekbayev က ဩဂုတ် ၂၇ ရက်တွင် ပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
သေဆုံးသူများ နှင့် ဒဏ်ရာရရှိသူများထဲတွင် အရပ်သားများ မပါရှိကြောင်း ၎င်းက မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ စက်မှု နှင့် စစ်အင်ဂျင်နီယာတပ်ဖွဲ့ပိုင် သိုလှောင်ရုံသည် Zhambyl ဒေသ Bayzak ခရိုင် Kainar ကျေးရွာ၌ တည်ရှိကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ သိုလှောင်ရုံ အနီးဝန်းကျင်ရှိ ကျေးရွာလေးရွာမှ ဒေသခံများအား ဘေးလွတ်ရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်း နှင့် လုယက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ရွှေ့ပြောင်းပေးသည့် နေရာသစ်များတွင် ကင်းလှည့်မှုများ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ ယင်းနေရာတစ်ဝိုက် ရထားလမ်း နှင့် ကားလမ်းများအား ပိတ်ထားကြောင်း ဝန်ကြီးဌာနက ပြောကြားခဲ့သည်။
မီးလောင်မှုကြောင့် ၆ ကြိမ်ထက်မနည်း ပေါက်ကွဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး လူ ၆၆ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာ ၎င်းတို့အနက် ၂၈ ဦးမှာ ဆေးရုံ၌ ဆေးကုသမှု ခံယူလျက် ရှိကြောင်း ရုရှားရုပ်သံလိုင်း RT ဌာနက အစောပိုင်းတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
အဆိုပါ လက်နက်ခဲယမ်း သိုလှောင်ရုံ၌ ပေါက်ကွဲမှုများ ထပ်မံ မရှိသော်လည်း မီးလောင်ကျွမ်းနေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း ကာဇတ်စတန် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ပြောကြားချက်ကို ကိုးကားဖော်ပြခဲ့သည်။
ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးများ နှင့် အရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှု နှင့် ပြည်တွင်းရေးရာ ဒုတိယဝန်ကြီးများသည် Zhambyl ဒေသသို့ အလျင်အမြန်သွားရောက်ခဲ့ကြောင်း ကာဇက်စတန်နိုင်ငံ သမ္မတ Kassym-Jomart Tokayev က ဩဂုတ် ၂၆ ရက်တွင် တွစ်တာစာမျက်နှာတွင် ရေးသားခဲ့သည်။
ယင်းဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ အသေးစိတ် အကြောင်းရင်းအား မရှိရသေးသော်လည်း ဝန်ကြီးဌာနက TNT သိုလှောင်ရုံသည် မီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့် ပေါက်ကွဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ဖွယ်ရှိကြောင်း ဆိုသည်။ ပေါက်ကွဲမှုအား စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် ကော်မရှင်တစ်ခု ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
4 killed, dozens injured in Kazakhstan ammunition depot blast
NUR-SULTAN, Aug. 27 (Xinhua) — Four servicemen were killed and dozens injured inaseries of explosions in southern Kazakh city of Taraz on Thursday night, authorities said Friday.
Atapress briefing held on Friday, Defense Minister Nurlan Yermekbayev said four servicemen have died while eliminating the consequences of the accident, and several people went missing.
There are no civilians among the dead and injured, he noted.
The depot of the engineering and sapper brigade of the ministry is located in the village of Kainar of the Bayzak District of the Zhambyl Region.
Residents of four nearby villages are being evacuated. Patrols are conducted in evacuated settlements to prevent looting. Railways and highways around the area are blocked, the ministry said.
Russian broadcaster RT reported ealier that the fire has resulted in at least six explosions, leaving 66 people injured, and 28 of them were still being treated in hospital.
There are no more explosions at the ammunition warehouse, but the fire is still raging, the Kazakh defense ministry was quoted as saying.
Kazakh President Kassym-Jomart Tokayev tweeted on Thursday that the ministers of Defense, Emergency Situations, and Deputy Minister of Internal Affairs flew to Zhambyl region.
Causes of the incident are still unknown, but the ministry said it can be caused by the burning of stored TNT. A commission had been set up to determine the cause. Enditem
ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြားများနှင့် လက်နက်ခဲယမ်းများ ဖမ်းမိ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၌ လက်နက်ခဲယမ်းများ သိမ်းဆည်းရမိ